Fitsaboana Proton ho an'ny homamiadan'ny gastrointestinal - Proton California
Miady amin'ny homamiadana gastrointestinal
Fomba fanafody Proton ho an'ny homamiadana Gastrointestinal
Ny teknolojia fanaraha-maso vatan-jaza pensilihazo an'i California Protons dia endrika marim-pototra amin'ny fikorontanan'ny taratra amin'ny homamiadana izay ahafahan'ny dokotera mikendry ny fivontosan'ny vavony gastrointestinal (GI) hita any amin'ireo faritra saro-pady sy saro-pady amin'ny làlam-pandevonan-kanina miaraka amin'ny taratra avo lenta.
Raha ampitahaina amin'ny fitsaboana fitsaboana pasifika pasifika taloha, ny teknolojia fanodinam-bolo arakaraka ny fandefasana ny vatan'ny vatan-javamaniry ho an'ny vavony, havanana, vorona, lalan-dra sy GI ambany ambany ao anatin'ny 2 milimetatra ary amin'ny fikarakarana tanteraka. Manafika mametaka ny fivontosana izahay ary mampihena ny fihanaky ny vatan'ny taolana mahasalama. Zava-dehibe io satria ireo tavy gastric sy colorectal ireo matetika dia mitaky fatra mahery vaika amin'ny taratra ary eo akaikin'ny tavy sy taova mahasalama izay mora voan'ny taratra. Ny fampihenana ny poizina mifandraika amin'ny taratra dia mampihena ny voka-dratsin'ny taratra ary mampitombo ihany koa ny fahafahan'ny marary mameno fitsaboana amin'ny fitsaboana hafa na mampihemotra.
Aretim-bavony na kibo
Misafidiana ny homamiadana miverimberina sy kansera metastika
Arovy ny lalan-vavanao, ny tsinay kely sy lehibe, vavony, voa, genital ary tadina
Mampihena ny voka-dratsin'ny fitsaboana amin'ny taratra, ao anatin'izany ny mie, mandoa, ny aretim-po, ny fikorontanana, ny tsy fahalemena (ny tsy fahaizana mamono otrikaina amin'ny sakafo), ny fivalanana, ny fanamorana ary ny fametavetana.
Soa azo avy amin'ny fitsaboana Proton ho an'ny homamiadana Gastrointestinal
Ny fitsaboana protonolika mandroso dia mamela ny dokotera amin'ny fomba voafantina tsara kokoa amin'ny taratra faran'izay miakatra amin'ny fivontosan'ny taola-mena sy sela homamiadana hita ao amin'ny làlam-pandevonan-kanina, ary mampihena ny fatra amin'ny sela mihanaka tsara sy taova mihantona. Amin'ny toe-javatra sasany, izany dia naseho mba hanomezana fitsaboana haingana kokoa noho ny fitsaboana taratra X-ray na dia amin'ny toe-javatra sarotra aza.
Satria ny fitsaboana proton dia afaka mifantoka tsara kokoa amin'ny doka taratra ho an'ny tanjona ary mametra azy any an-kafa, ny dokotera dia afaka mampihena ny taratra ny sela salama manodidina ny fivontosana izay mety hisy fiantraikany amin'ny fahaizanao mandevona sy manangona metabolika ny otrikaina ary manala ireo fako.
Ny teknika manokana dia azo ampiasaina miaraka amin'ny fitsaboana proton mba hikendrena fivontosana mihetsika miaraka amin'ny fametrahana ara-teknika. Zava-dehibe izany ho an'ny marary homamiadana gastrointestinal izay voatsabo ho an'ny homamiadan'ny vavony.
Ny fitsaboana mitambatra, ny chimioteraly sy ny taratra dia nanjary fitsaboana mahazatra ho an'ny kankana gastrointestinal be dia be. Miankina amin'ny sehatra, ny toerana sy ny karazana homamiadana, ny fitsaboana amin'ny safidy sy ny loza mety hitranga amin'ny voka-dratsiny. Ny safidin'ny fitsaboana koa dia voakasiky ny taona, ny fahasalamana ankapobeny ary ny filan'ny tena manokana.
Izay antsoina koa hoe homamiadana be dia be, mihanaka ny kibo ao anaty vavony ary aorian'ny fandalinana ny halalin'ny kansera dia miparitaka amin'ny rindrina 5 amin'ny rindrin'ny vavonin'ny vavony ary raha efa niely ny aretin'ny lymph teo akaikiny. Indraindray ny homamiadana dia mila fitsaboana aretin'aretina aorian'ny fandidiana. Arakaraka ny ambaratongan'ny fivontosana, ny toeran'ny fahasalaman'ny ankapobeny amin'ny marary sy ny fatran'ny fandidiana, ny fitsaboana protonety dia azo omena miaraka amin'ny fitsaboana simia.
Ity karazana homamiadana ity dia misy fiantraikany amin'ny ampahany amin'ny tsinay lehibe. Miankina amin'ny alàlan'ny homamiadana, ny fitsaboana taratra ho an'ny karazana kansera ireto matetika dia omena alohan'ny na manaraka fandidiana. Raha nanitatra tanteraka ny rindrin'ny kolonely ny homamiadana dia mety hampiasaina hampihenana ny fivontosana mihanaka ny rindrin'ny rectal na ny fanaraha-maso ny fanaintainana.
Ny homamiadana sela matetika dia carcinoma sela mijoro izay mipoitra amin'ny fisokafan'ny ivelany ny làlam-bavony. Ity karazana homamiadana ity matetika dia fitsaboana amin'ny fitsaboana taratra izay omena miaraka amin'ny chimiothérapie. Noho ny toerany, ny chemoradiation no safidy fitsaboana voalohany fa raha tsy fandidiana ary ny fitsaboana proton dia afaka manome fitsaboana radiation izay tsy dia misy poizina izay mety hampihena ny fiantraikany sy manimba ny sela manodidina.
Ny kansera kôpôla dia tonga ao amin'ny tsinay lehibe. Ny fandidiana dia fitsaboana mahazatra indrindra, indrindra amin'ny sehatra I sy II rehefa tsy miitatra ny homamiadana. Ny chimioterapioma koa dia aroso amin'ny ambaratonga efa ela kokoa izay voan'ny kansera. Ny fitsaboana protonon dia afaka atoro ihany koa hanampiana amin'ny fifehezana ny homamiadana.
Ny fitsaboana ny faritra tsy voafehy taloha dia mety ho sarotra, indrindra eo amin'ny faritra gastrointestinal. Ny fihodinana faharoa amin'ny fitsaboana taratra X-ray dia mety hampidi-doza satria tsy ho adinon'ny "tsiranoka miverina" ny tsiranoka salama manodidina ny fivontosana miverimberina. Ny fitsaboana ny vatan'i Proton dia mety ahafahan'ny dokotera mifantoka tsara amin'ny fatra amin'ny tanjona ary hametra izany any an-toeran-kafa, ka avelao ny fitsaboana indray miaraka amin'ny taratra amin'ny marary voafantina.
Ny fitsaboana fitsaboana Proton ao amin'ny California Protons cancer Therapy Centre any San Diego dia mety hanolotra valiny mitovy amin'izany amin'ny taratra X-ray manara-penitra, raha mampihena ny vokatra maharitra sy mety hiharan'ny fiainana toy ny ulceration, perforation ary ny rà anatiny noho ny fahasimban'ny taratra. faritra mivalona sy pelvis. Mety hihena ihany koa ny kansera faharoa any aoriana any noho ny fihenan'ny tara-pahazavana amin'ny sela sy ny taova mahasalama manodidina anao.
Fandinihana fikarohana manohana ny fitsaboana ny proton ho an'ny homamiadana gastrointestinal
Fitsaboana ny vatan-jaza Proton ho an'ny homamiadana hepatocellular lehibe
Fitsaboana ny vatan-jaza protonoma miverimberina ho an'ny carcinoma hepatocellular
Fametrahana spacer sy mpitsabo aretim-boko ho an'ny carcinoma hepatocellular tsy voatanisa
Radioteran'ny vatan-jaza protota beam-pandrefesana avo be: ny valin'ny fiandohan'ny dingana II